ကြည့်ရင်း ကြည်နူးပြီး ပြုံးနေရမယ့် ချစ်စရာ BL ဇာတ်ကားကောင်း (၃)ကား - For her Myanmar
နောက်ဆုံးတစ်ခုက အသက် <3
ယောင်းတို့ရေ.. ခုရက်ပိုင်း ဘာကားတွေ ကြည့်ဖြစ်ကြလဲ? မင်မင်တော့ BL တောထဲ မျော… အဲ့တော့ ကိုယ်မျောသလို ယောင်းတို့လည်း မျောရအောင်ဆိုတဲ့ စေတနာဇိုးလေးနက် မင်မင်က ပေါက်ချခဲ့ပါပြီရှန်… ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ယောင်းတို့ကို ကြည့်စေချင်တဲ့ BL ဇာတ်ကားလေး (၃)ကား အကြောင်း ပြောပြပေးမယ်နော်… မပြောခင် အရင် စကားကြိုခံချင်တာကတော့ skinship ပါမှ ကြိုက်တာဆိုတဲ့ ယောင်းတွေအတွက် ဒီကားတွေဟာ အဆင်ပြေချင်မှ ပြေပါလိမ့်မယ်… မင်မင် ရွေးထားပေးတဲ့ ဒီဇာတ်ကား (၃)ကားဟာ ယောက်ျားလေး နှစ်ယောက်ကြားက အချစ်သက်သက်ကို အဓိပ္ပာယ်ပေါ်အောင် ရိုက်ပြထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတွေမို့ စိတ်ဖြူဖြူသန့်သန့်လေးနဲ့ ကြည့်ပြီး ကြည်နူးကြရမယ့် ဇာတ်ကားလေးတွေပါ။ အလွန်ဆုံးပါမှ အနမ်းပေးတာလောက်ပါပဲ။ မင်မင် ဒီကားတွေကို ဘာကြောင့်ကြိုက်ရလဲဆိုတဲ့ အဖြေဟာလည်း ဒါပါပဲ…
၃။2Moons: The Series (God & Bass) – IMDB 7.9/10
နာမည်အတိုင်းပါပဲ… Moon နှစ်ယောက်ကြားက ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့… ဒီနေရာမှာ Moon ဆိုတဲ့ အသုံးနဲ့ မရင်းနှီးတဲ့ ယောင်းတို့ကို ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် ကိုယ်တွေ တက္ကသိုလ်တွေမှာ King နဲ့ Queen ရွေးသလို ထိုင်းမှာတော့ Moon နဲ့ Star ဆိုပြီး ရွေးပါတယ်။ Moon က ကင်း၊ Star က ကွင်းပေါ့…
Wayo ဆိုတဲ့ ကောင်လေးက Kantaphat University မှာ ပထမနှစ်အဖြစ် တက်ရောက်မယ့်သူပါ။ အဲဒီ တက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်းမှာပဲ သူ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက သဘောကျခဲ့ရတဲ့ အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်ကလည်း တက်နေပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ Wayo ဟာ Moon အဖြစ်အရွေးခံရဖို့ ဖြစ်လာပြီး သူ သဘောကျခဲ့တဲ့ အစ်ကိုကြီးကတော့ (တခြားမေဂျာက) အရင်နှစ်က Moon ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ ဒါနဲ့ပဲ Moon ရွေးချယ်ပွဲမတိုင်ခင် လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ သူတို့နှစ်ယောက် မကြာမကြာ တွေ့ပြီး ရင်းနှီးလာရာက….
ကျန်တာတော့ ကိုယ်တိုင်သာ ဆက်ကြည့်ပါ ယောင်းတို့ရေ… ဒီ စီးရီးစ်မှာ အပိုင်း ၁၂ပိုင်း ပါရှိပြီး အားလုံးက Season2ထွက်လာဦးမလားလို့ မျှော်လင့်ခဲ့ကြပေမဲ့ ခုထိတော့ ထွက်မလာသေးပါဘူး :'( စီနီယာ Moon အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ God ကြောင့်လို့ ပြောကြပေမဲ့ တိကျသေချာတဲ့ အကြောင်းပြချက်တော့ မပေးပါဘူး။ အက်ဒ်မင်ကတော့ Wayo အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ ကလေးလေး (အမယ်.. သူ့ကလေးလေးပါပေါ့ 😛 ) Bass လေးကို အရမ်းတွေ သဘောကျမိပါပဲနော်.. ချစ်စရာလေး <3
Related Article >>> ကြည်နူးလွမ်းမောစရာ BL အခန်းဆက် ဝတ္ထုလေးများ
၂။ He is Coming to Me (Ohm & Singto)
ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ Thang လို့ခေါ်တဲ့ ကောင်လေးဟာ ငယ်လေးကတည်းက သရဲတွေကို မြင်ရတဲ့အပြင် ဒီသရဲတွေ ဘာကြောင့် မကျွတ်လဲဆိုတာကိုပါ အရောင်လေးတွေနဲ့ ခွဲမြင်ရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ပါ။ တစ်ရက် သူ့ဖေဖေနဲ့ သင်္ချိုင်းကန်တော့ပွဲလာရင်း Meth လို့ခေါ်တဲ့ သရဲ အစ်ကိုကြီး တစ်ယောက်ကို တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ Meth ကို သနားတဲ့ Thang လေးဟာ သင်္ချိုင်းကန်တော့ပွဲ လာတိုင်း Meth ကြိုက်တတ်တဲ့ မုန့်လေးတွေ ယူယူလာပေးခဲ့ပါတယ်။ Meth ကတော့ ဒီကောင်လေးဟာ သူ့ကို မြင်ရတယ်လို့ ထင်နေပေမဲ့ မသေချာမရေရာ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။Thang ရဲ့ ဖေဖေ ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Thang ဟာ သင်္ချိုင်းကန်တော့ပွဲတွေကို ရောက်မလာတော့ပါဘူး။ Meth ကတော့ နှစ်တိုင်း Thang များလာမလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ စောင့်ရင်းပေါ့လေ…
Thang လေး Meth ရှိရာ သင်္ချိုင်းကို နောက်တစ်ကြိမ် ရောက်လာချိန်မှာတော့ အရွယ်ရောက်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကောင်လေး ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ နဂိုတည်းက Meth ကို သနားရင်းစွဲ ရှိခဲ့တဲ့ Thang .. Meth ကို သူ့အဆောင်တိုက်ခန်းကို ခေါ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့….
သရဲတစ်ကောင် နဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကြားက ရိုမန့်စ်ဟာ အတော်လေး မျက်ရည်ခြူနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ ဒီစီးရီးစ်မှာ အပိုင်း ၈ ပိုင်းပဲ ပါရှိပြီး အပိုင်း ၅ ကစလို့ ငိုရတော့တာပါပဲ 😀 ဒါပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းရဲ့ အလှည့်အပြောင်းတွေ၊ Meth ရဲ့ သေဆုံးရခြင်း အကြောင်းရင်းတွေ၊ Meth, Thang နဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကြားက လေးပွင့်ဆိုင် ဇာတ်လမ်းတွေဟာ ဇာတ်ကားကို မပျင်းရအောင် ဆွဲခေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ချစ်စရာ၊ လွမ်းစရာ၊ ကြည်နူးစရာ ဇာတ်လမ်းလေးမို့ ယောင်းတို့ကို ကြည့်စေချင်တယ် ယောင်းတို့ရေ..
Related Article >>> ကောင်လေးတွေရဲ့ရိုမန့်စ်
၁။ Sotus: The Series (Singto & Krist) – IMDB 8.2/10
ဒါက အက်ဒ်မင်ကြည့်ဖူးသမျှ BL တွေထဲ အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကားပါပဲ ယောင်းတို့ရေ… ၂၀၁၆ တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး အက်ဒ်မင်ကြည့်နေတာ အခေါက်ပေါင်း ၆၇၉သိန်းလောက် ရှိနေတာတောင် မရပ်နိုင်သေးပါဘူး 😛 သူက Season ၂ ခု နဲ့ Mini-series တစ်ပိုင်း ထွက်ထားပါတယ်။ Sotus: The Series က Season 1 ဖြစ်ပြီး Sotus S: The Series က Season2ပါ။
ဒါတော့ Season2ရဲ့ ပိုစတာပါ
ဇာတ်လမ်းကတော့ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသား နှစ်ယောက်ကြားက ဇာတ်လမ်းပေါ့… Arthit ဟာ တတိယနှစ် Head Hazer (မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ပဲ ပြောရမှာပေါ့) တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Kongpob ကတော့ ပထမနှစ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ S.O.T.U.S ဆိုတာဟာ အကြမ်းဖျဉ်းအပေါ်ယံ ကြည့်လိုက်ရင်တော့ အာဏာကို သုံးပြီး စီနီယာတွေက ဂျူနီယာတွေကို ဖိနှိပ်ထားတဲ့ စနစ်တစ်ခုလို့ Kongpob က အစပိုင်းမှာ ယူဆပါတယ်။ ဒါကိုမကြိုက်တဲ့ သူက ကန့်လန့်တိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Head Hazer ဖြစ်တဲ့ Arthit နဲ့ သူ့ကြား မပြေလည် တင်းမာမှုပေါင်းများစွာပေါ့… ဒါပေမဲ့ Hazing Activity တွေ ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့…
ကျန်တာတော့ ယောင်းတို့ပဲ ဆက်ကြည့်ပါနော်.. အက်ဒ်မင်ပြောပြရင် ပေါ့သွားမှာစိုးလို့… ကြည့်လိုက်ရင် ကြိုက်မိမှာ ကျိန်းသေတဲ့ ဇာတ်ကားပါ ယောင်းတို့ရေ… Season ၂ ခုလုံး ကြည့်လို့ပြီးသွားရင် Our Skyy ဆိုတဲ့ Mini Series ရဲ့ အပိုင်း ၅ (Arthit – Kongpobအပိုင်း) ကို ဆက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Singto နဲ့ Krist ဆိုတာလည်း သရုပ်ဆောင်ကောင်းလိုက်တာ ဆိုတာမှ အပြင်က သူတို့ရဲ့ ပုံစံတွေနဲ့ တခြားစီပါပဲ 😀 အက်ဒ်မင်ဆို သူတို့ရဲ့ အပြင်က ပုံစံကို မြင်လိုက်တဲ့အခါ ပါးစပ်အဟောင်းသား.. ဟင်.. ဇာတ်ကားထဲကနဲ့ တခြားစီပဲရောတို့ ဘာတို့ ဖြစ်သွားတာ… ဆက်ပြောရင် SingKit ဘုန်းတော်ဘွဲ့တွေ ရောက်တော့မယ် :’D
ခု အက်ဒ်မင်ပြောပြခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကား (၃)ကားလုံးမှာ Skinship ဆိုလို့ အလွန်ဆုံးပါရင် Kiss Scene လောက်ပါပဲ ယောင်းတို့ရေ.. Kiss Scene တောင်မှ ဖြူဖြူစင်စင် အနမ်းလေးတွေမို့ ကြည့်ရင်းကို ကြည်နူးရတာမျိုးပါ။ ဒါကပဲ ဒီဇာတ်ကားတွေကို အက်ဒ်မင် ဘာကြောင့် ကြိုက်ရလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေပါပဲ…
ယောင်းတို့လည်း ဒီဇာတ်ကားလေးတွေကို နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်ယောင်းရေ… ယောင်းတို့ သဘောကျတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတွေ ရှိရင်လည်း အက်ဒ်မင့်ကို ပြန်ပြောပြသွားကြပါဦးနော်… (အဲ.. အဲ.. Peraya တွေနဲ့ OhmSing Shipper တွေ ရန်မဖြစ်ကြေးနော်… အက်ဒ်မင်က ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတွေပဲ ရွေးထုတ်ထားတာမို့ တို့တွေ သူတို့အနုပညာကိုပဲ အားပေးကြရအောင်လား :* )
နောကျဆုံးတဈခုက အသကျ <3
ယောငျးတို့ရေ.. ခုရကျပိုငျး ဘာကားတှေ ကွညျ့ဖွဈကွလဲ? မငျမငျတော့ BL တောထဲ မြော… အဲ့တော့ ကိုယျမြောသလို ယောငျးတို့လညျး မြောရအောငျဆိုတဲ့ စတေနာဇိုးလေးနကျ မငျမငျက ပေါကျခခြဲ့ပါပွီရှနျ… ဒီတဈပတျမှာတော့ ယောငျးတို့ကို ကွညျ့စခေငျြတဲ့ BL ဇာတျကားလေး (၃)ကား အကွောငျး ပွောပွပေးမယျနျော… မပွောခငျ အရငျ စကားကွိုခံခငျြတာကတော့ skinship ပါမှ ကွိုကျတာဆိုတဲ့ ယောငျးတှအေတှကျ ဒီကားတှဟော အဆငျပွခေငျြမှ ပွပေါလိမျ့မယျ… မငျမငျ ရှေးထားပေးတဲ့ ဒီဇာတျကား (၃)ကားဟာ ယောကျြားလေး နှဈယောကျကွားက အခဈြသကျသကျကို အဓိပ်ပာယျပျေါအောငျ ရိုကျပွထားတဲ့ ဇာတျကားလေးတှမေို့ စိတျဖွူဖွူသနျ့သနျ့လေးနဲ့ ကွညျ့ပွီး ကွညျနူးကွရမယျ့ ဇာတျကားလေးတှပေါ။ အလှနျဆုံးပါမှ အနမျးပေးတာလောကျပါပဲ။ မငျမငျ ဒီကားတှကေို ဘာကွောငျ့ကွိုကျရလဲဆိုတဲ့ အဖွဟောလညျး ဒါပါပဲ…
နာမညျအတိုငျးပါပဲ… Moon နှဈယောကျကွားက ဇာတျလမျးလေးပေါ့… ဒီနရောမှာ Moon ဆိုတဲ့ အသုံးနဲ့ မရငျးနှီးတဲ့ ယောငျးတို့ကို ရှငျးပွရမယျဆိုရငျ ကိုယျတှေ တက်ကသိုလျတှမှော King နဲ့ Queen ရှေးသလို ထိုငျးမှာတော့ Moon နဲ့ Star ဆိုပွီး ရှေးပါတယျ။ Moon က ကငျး၊ Star က ကှငျးပေါ့…
Wayo ဆိုတဲ့ ကောငျလေးက Kantaphat University မှာ ပထမနှဈအဖွဈ တကျရောကျမယျ့သူပါ။ အဲဒီ တက်ကသိုလျတဈခုတညျးမှာပဲ သူ ငယျငယျလေးကတညျးက သဘောကခြဲ့ရတဲ့ အဈကိုကွီးတဈယောကျကလညျး တကျနပေါတယျ။ ဖွဈခငျြတော့ Wayo ဟာ Moon အဖွဈအရှေးခံရဖို့ ဖွဈလာပွီး သူ သဘောကခြဲ့တဲ့ အဈကိုကွီးကတော့ (တခွားမဂြောက) အရငျနှဈက Moon ဖွဈနခေဲ့တာပါ။ ဒါနဲ့ပဲ Moon ရှေးခယျြပှဲမတိုငျခငျ လှုပျရှားမှုတှမှော သူတို့နှဈယောကျ မကွာမကွာ တှပွေီ့း ရငျးနှီးလာရာက….
ကနျြတာတော့ ကိုယျတိုငျသာ ဆကျကွညျ့ပါ ယောငျးတို့ရေ… ဒီ စီးရီးဈမှာ အပိုငျး ၁၂ပိုငျး ပါရှိပွီး အားလုံးက Season2ထှကျလာဦးမလားလို့ မြှျောလငျ့ခဲ့ကွပမေဲ့ ခုထိတော့ ထှကျမလာသေးပါဘူး :'( စီနီယာ Moon အဖွဈ သရုပျဆောငျတဲ့ God ကွောငျ့လို့ ပွောကွပမေဲ့ တိကသြခြောတဲ့ အကွောငျးပွခကျြတော့ မပေးပါဘူး။ အကျဒျမငျကတော့ Wayo အဖွဈ သရုပျဆောငျတဲ့ ကလေးလေး (အမယျ.. သူ့ကလေးလေးပါပေါ့ 😛 ) Bass လေးကို အရမျးတှေ သဘောကမြိပါပဲနျော.. ခဈြစရာလေး <3
Related Article >>> ကွညျနူးလှမျးမောစရာ BL အခနျးဆကျ ဝတ်ထုလေးမြား
ဒီဇာတျလမျးမှာတော့ Thang လို့ချေါတဲ့ ကောငျလေးဟာ ငယျလေးကတညျးက သရဲတှကေို မွငျရတဲ့အပွငျ ဒီသရဲတှေ ဘာကွောငျ့ မကြှတျလဲဆိုတာကိုပါ အရောငျလေးတှနေဲ့ ခှဲမွငျရတဲ့ ကလေးတဈယောကျပါ။ တဈရကျ သူ့ဖဖေနေဲ့ သင်ျခြိုငျးကနျတော့ပှဲလာရငျး Meth လို့ချေါတဲ့ သရဲ အဈကိုကွီး တဈယောကျကို တှခေဲ့ပါတယျ။ Meth ကို သနားတဲ့ Thang လေးဟာ သင်ျခြိုငျးကနျတော့ပှဲ လာတိုငျး Meth ကွိုကျတတျတဲ့ မုနျ့လေးတှေ ယူယူလာပေးခဲ့ပါတယျ။ Meth ကတော့ ဒီကောငျလေးဟာ သူ့ကို မွငျရတယျလို့ ထငျနပေမေဲ့ မသခြောမရရော ဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။Thang ရဲ့ ဖဖေေ ဆုံးသှားပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ Thang ဟာ သင်ျခြိုငျးကနျတော့ပှဲတှကေို ရောကျမလာတော့ပါဘူး။ Meth ကတော့ နှဈတိုငျး Thang မြားလာမလားဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြလေးနဲ့ စောငျ့ရငျးပေါ့လေ…
Thang လေး Meth ရှိရာ သင်ျခြိုငျးကို နောကျတဈကွိမျ ရောကျလာခြိနျမှာတော့ အရှယျရောကျနတေဲ့ တက်ကသိုလျကြောငျးသား ကောငျလေး ဖွဈနခေဲ့ပါပွီ။ နဂိုတညျးက Meth ကို သနားရငျးစှဲ ရှိခဲ့တဲ့ Thang .. Meth ကို သူ့အဆောငျတိုကျခနျးကို ချေါသှားပွီးတဲ့နောကျမှာတော့….
သရဲတဈကောငျ နဲ့ ကောငျလေးတဈယောကျကွားက ရိုမနျ့ဈဟာ အတျောလေး မကျြရညျခွူနိုငျတဲ့ ဇာတျကားပါ။ ဒီစီးရီးဈမှာ အပိုငျး ၈ ပိုငျးပဲ ပါရှိပွီး အပိုငျး ၅ ကစလို့ ငိုရတော့တာပါပဲ 😀 ဒါပမေဲ့ ဇာတျလမျးရဲ့ အလှညျ့အပွောငျးတှေ၊ Meth ရဲ့ သဆေုံးရခွငျး အကွောငျးရငျးတှေ၊ Meth, Thang နဲ့ သူ့သူငယျခငျြးတှကွေားက လေးပှငျ့ဆိုငျ ဇာတျလမျးတှဟော ဇာတျကားကို မပငျြးရအောငျ ဆှဲချေါသှားနိုငျပါတယျ။ ခဈြစရာ၊ လှမျးစရာ၊ ကွညျနူးစရာ ဇာတျလမျးလေးမို့ ယောငျးတို့ကို ကွညျ့စခေငျြတယျ ယောငျးတို့ရေ..
Related Article >>> ကောငျလေးတှရေဲ့ရိုမနျ့ဈ
ဒါက အကျဒျမငျကွညျ့ဖူးသမြှ BL တှထေဲ အကွိုကျဆုံးဇာတျကားပါပဲ ယောငျးတို့ရေ… ၂၀၁၆ တုနျးက ထှကျရှိခဲ့တဲ့ ဇာတျကားဖွဈပွီး အကျဒျမငျကွညျ့နတော အခေါကျပေါငျး ၆၇၉သိနျးလောကျ ရှိနတောတောငျ မရပျနိုငျသေးပါဘူး 😛 သူက Season ၂ ခု နဲ့ Mini-series တဈပိုငျး ထှကျထားပါတယျ။ Sotus: The Series က Season 1 ဖွဈပွီး Sotus S: The Series က Season2ပါ။
ဒါတော့ Season2ရဲ့ ပိုစတာပါ
ဇာတျလမျးကတော့ အငျဂငျြနီယာကြောငျးသား နှဈယောကျကွားက ဇာတျလမျးပေါ့… Arthit ဟာ တတိယနှဈ Head Hazer (မွနျမာလိုဆိုရငျတော့ ကြောငျးသားခေါငျးဆောငျပဲ ပွောရမှာပေါ့) တဈယောကျဖွဈပွီး Kongpob ကတော့ ပထမနှဈကြောငျးသားတဈယောကျပါ။ S.O.T.U.S ဆိုတာဟာ အကွမျးဖဉျြးအပျေါယံ ကွညျ့လိုကျရငျတော့ အာဏာကို သုံးပွီး စီနီယာတှကေ ဂြူနီယာတှကေို ဖိနှိပျထားတဲ့ စနဈတဈခုလို့ Kongpob က အစပိုငျးမှာ ယူဆပါတယျ။ ဒါကိုမကွိုကျတဲ့ သူက ကနျ့လနျ့တိုကျတဲ့အခါမှာတော့ Head Hazer ဖွဈတဲ့ Arthit နဲ့ သူ့ကွား မပွလေညျ တငျးမာမှုပေါငျးမြားစှာပေါ့… ဒါပမေဲ့ Hazing Activity တှေ ပွီးသှားတဲ့နောကျမှာတော့…
ကနျြတာတော့ ယောငျးတို့ပဲ ဆကျကွညျ့ပါနျော.. အကျဒျမငျပွောပွရငျ ပေါ့သှားမှာစိုးလို့… ကွညျ့လိုကျရငျ ကွိုကျမိမှာ ကြိနျးသတေဲ့ ဇာတျကားပါ ယောငျးတို့ရေ… Season ၂ ခုလုံး ကွညျ့လို့ပွီးသှားရငျ Our Skyy ဆိုတဲ့ Mini Series ရဲ့ အပိုငျး ၅ (Arthit – Kongpobအပိုငျး) ကို ဆကျကွညျ့လို့ရပါတယျ။
Singto နဲ့ Krist ဆိုတာလညျး သရုပျဆောငျကောငျးလိုကျတာ ဆိုတာမှ အပွငျက သူတို့ရဲ့ ပုံစံတှနေဲ့ တခွားစီပါပဲ 😀 အကျဒျမငျဆို သူတို့ရဲ့ အပွငျက ပုံစံကို မွငျလိုကျတဲ့အခါ ပါးစပျအဟောငျးသား.. ဟငျ.. ဇာတျကားထဲကနဲ့ တခွားစီပဲရောတို့ ဘာတို့ ဖွဈသှားတာ… ဆကျပွောရငျ SingKit ဘုနျးတျောဘှဲ့တှေ ရောကျတော့မယျ :’D
ခု အကျဒျမငျပွောပွခဲ့တဲ့ ဇာတျကား (၃)ကားလုံးမှာ Skinship ဆိုလို့ အလှနျဆုံးပါရငျ Kiss Scene လောကျပါပဲ ယောငျးတို့ရေ.. Kiss Scene တောငျမှ ဖွူဖွူစငျစငျ အနမျးလေးတှမေို့ ကွညျ့ရငျးကို ကွညျနူးရတာမြိုးပါ။ ဒါကပဲ ဒီဇာတျကားတှကေို အကျဒျမငျ ဘာကွောငျ့ ကွိုကျရလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးရဲ့ အဖွပေါပဲ…
ယောငျးတို့လညျး ဒီဇာတျကားလေးတှကေို နှဈသကျလိမျ့မယျလို့ ထငျပါတယျယောငျးရေ… ယောငျးတို့ သဘောကတြဲ့ ဇာတျကားလေးတှေ ရှိရငျလညျး အကျဒျမငျ့ကို ပွနျပွောပွသှားကွပါဦးနျော… (အဲ.. အဲ.. Peraya တှနေဲ့ OhmSing Shipper တှေ ရနျမဖွဈကွေးနျော… အကျဒျမငျက ကောငျးတဲ့ ဇာတျကားလေးတှပေဲ ရှေးထုတျထားတာမို့ တို့တှေ သူတို့အနုပညာကိုပဲ အားပေးကွရအောငျလား :* )
Tags: Boys' Love, Bromance, Fun, love, Movie review, series